Xisaabiyeyaasha Suuqa, Qalabka, iyo Barnaamijyada | Martech Zone
Martech Zone Barnaamijyadu waa ururinta qalab yar oo shabakadda ku saleysan, barnaamijyada ku saleysan websaydhka iyo xisaabiyeyaasha oo bilaash lagu siiyo suuqgeeyayaasha si ay uga caawiyaan inay halkaas ka shaqeeyaan maalinba maalinta ka dambaysa.
Waa maxay Cinwaankeyga IP-ga? Iyo Sida Looga Reebo Google Analytics
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay cinwaankaaga IP. Tusaalooyin lammaane ah ayaa caddeeya qaar ka mid ah goobaha amniga ama ka shaandheynta taraafikada Google Analytics. Maskaxda ku hay in cinwaanka IP-ga ee shebekadda websaydhku arko aanu ahayn cinwaankaaga gudaha ee IP-ga, waa cinwaanka IP ee shabakadda aad ku jirto. Natiijo ahaan, beddelashada shabakadaha bilaa-waayirka ah waxay soo saari doonaan cinwaan cusub oo IP ah. Qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha adeegga Internetka uma xilsaaraan meheradaha ama guryaha meel deggan
Arbacada, Maarso 31, 2021 Tuesday, May 11, 2021 Douglas Karr
U adeegso qalabkan si aad u dhisto URL-kaaga Ololaha Google Analytics. Foomku wuxuu ansaxinayaa URL-kaaga, waxaa kujira caqli gal ah inuu horey ulahadlay dhexdeeda, wuxuuna kudarmayaa dhamaan isbadalada UTM ee haboon: utm_campaign, utm_source, utm_medium, iyo ikhtiyaar utm_term iyo utm_content. Haddii aad ku aqrinaysid tan RSS ama emayl, guji bogga si aad u adeegsato aaladda: Sida Loo Ururiyo loona Raadinayo Xogta Ololaha ee Falanqaynta Google Halkan waxaa ah fiidiyow dhammaystiran oo ku saabsan qorsheynta